शनिवार, आश्विन २४, २०७७ ओखल न्युज
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीबाट दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको छ । साविकका सिमचौर, केदारअखडा, कानाचौर, सातफरी, धिर्कामाणडौँ, गगुडा र चवराचौतारागरी ७ वटा गाविस मिलेर यो गाउँपालिका बनेको हो । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका जिल्लामै कृषिउत्पादन र पशुपालनमा राम्रो संभावना भएको क्षेत्रकोरुपमा चिनिन्छ । तत्कालिन नेकपा(माओबादी)को तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा बोगटान पुड्शिल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित कमलबहादुर गड्शिला स्थानीय स्तरमा हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रिय युवा नेताका रुपमा समेत चिनिनुहुन्छ । यसैसन्दर्भमा पत्रकार डिलबहादुर सिंहले बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिला सँग गर्नुभएको कुराकानीको सार संक्षेप
१. तपाइले चुनावी अभियानका क्रममा मतदाता सामु के के प्रतिवद्धताहरु गर्नु भएको थियोे ? के कति पूरा भए ?
हामीले स्थानीय निर्वाचनका क्रममा मतदाताको बिचमा जाँदा घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेका थियौं । जसमा बिशेष गरी जनताका जनजिविकका कुरा, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको समग्र बिकासका कुराहरु रोजगारी, पर्यटन, उर्जा, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाइ तथा जलबायु परिवर्तनका असरहरु कमगर्ने बिषय, प्राकृतिक स्रोतहरुको सँरक्षण तथा उपयोगका साथै सामाजिक बिकासका बिषयबस्तुहरु जातिय छुवाछुतको अन्त्य, छाउपडी प्रथा, लैगिंक हिंसा बिरुद्धका कार्यक्रम लगायतका बिषयहरु समेटिएका थियो ।
प्रतिवद्धता गरिएका कुराहरुको बिश्लेषण गर्दा धेरै जसो बिषयहरु हामिले पुरा गरिसकेका छौं । कतिपय बिषय शुरुवाती चरणमा छन् । गाउँपालिकाका सबै वडा कार्यालयहरु सम्म सडक सुविधा पुगिसकेको छ । सबै वडाहरुमा खानेपानी योजनाहरु सञ्चालनमा छन् । कतिपय स्थानमा खानेपानी योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । कति सम्पन्न हुने चरणमा छन् । हामिले उज्यालो गाउँपालिकाको कुरा गरेका थियौं हामी गाउँपालिकाको सबै वडाहरुमा बिजुली पुर्याउने अभियानमा छौं, जसका लागि स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिजुली नपुगेको ठाउँहरुमा र सोलार प्लान्ट निर्माणको गरिरहेका छौं ।
बिद्यालय स्तरमा आबश्यकता अनुसार भौतिक निर्माण, बिद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक अपुग भएका बिद्यालयहरुमा अनुदानको ब्यवस्था, बिद्यालयमा मेसिन मार्फत सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था गरेका छौं । हालै मात्र खत्याडी माध्यामिक बिद्यालय देशभरीका नमुना बिद्यालयमा पर्न सफल भएको छ । गाउँपालिकामा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ११ वटा स्वास्थ्य सँस्थाहरु छन जसमध्ये तिनबटा हालै मात्र स्थापना भएका छन् । गाउँपालिकामा १५ सैयाको स्थायी अस्पताल निर्माणको लागि केहि दिनमा नै टेन्डर हुदैछ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि कृषिमा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर बिकास गरिरहेका छौं । स्थानीय टुनागाड खोलामा मोटरेवल पुलको टेन्डर हुदैछ । सामाजिक बिकासको सवालमा छाउपडी प्रथा अन्त्यको लागि छाउगोठ भत्काएर घरभित्र नै बस्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस बिचमा ३० बटा विभिन्न ऐन कानुनको निर्माण गरिएको छ ।
२. अध्यक्षको रुपमा गाउँपालिकामा आइसकेपछि खास गरेर सम्झनयोग्य कामहरु के भए ?
मैले अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सम्हाली सकेपछि थुप्रै सम्झन योग्य र नयाँ कामहरु भएकाछन् । जस मध्ये हामीले गाउँपालिका र ७ वटै वडा कार्यालयहरुको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गरेका छौं । बिधुतको कुरा गर्दा गाउँपालिकाका चारवटा वडाहरुमा बिधुत सेवा पुगिसकेको छ । बिधुत सेवा नपुगेका तिनवटा वडाहरुमा १ मेघावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट राख्दैछौं । अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको पठनपाठनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी गाउँपालिकाले लिएको छ । गरिब सँग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तरगत सम्पुर्ण वडाहरुमा रहेका खरका छाना भएका घरहरुमा जस्तापाता लगाएर खरमुक्त घरहरु बनाउने कार्यक्रम छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै हामी २ सय ३० घरधुरीमा जस्तापाता लगाउनमा सहयोग गर्ने छौं ।
गरिबसंग अध्यक्ष कार्यक्रम अन्तरगत निर्माण गरिको जस्ता पाताको घर
३.तपाईहरुका कामको मध्यावधी समिक्षा गर्ने बेला भयो ? कस्तो समिक्षा गर्नु भएको छ ?
पछिल्लो समय देश संघियतामा गइसकेपछि स्थानीय तहबाट आम नागरिकले बढी नै अपेक्षा गरेका छन् । मध्यावधी भन्दा पनि बढी समय गइसकेको छ । यस बिचमा केही त्रुटी पनि भएको हुन सक्छ । जस्तो हालैको कोरोना सँक्रमणको त्रासले उत्पन्न गराएको बिषम परिस्थितीका कारण समयमा नै कतिपय योजना सम्पन्न गर्न सकिएन । यस विचमा हामीले ३० वटा बिभिन्न ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गरेका छौं । कर्मचारी अभाव, ऐन कानुन सबै नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने लगायतका कुराहरु समस्याको रुपमा आए पनि हामिले मतदाता सामु ब्यक्त गरिएका अधिकांश प्रतिबद्धता पुरा गरेका छौं । अवको समय बाँकि प्रतिबद्धता पुरा गर्नमा जाने छ ।
४. बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकालाइ समृद्ध बनाउने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना के के ल्याउनु भएको छ ?
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा बिकट भए पनि यस क्षेत्रमा थुप्रै सँभावना पनि छन् । यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिउपज, मासुजन्य पदार्थ, फलफुल जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहको तुलनामा बिशिष्ट प्रकृतीका छन् । ब्यवसायिक कृषि र पशुपालनको बिकास मार्फत भारतबाट फर्किएका युवाहरुलाइ स्वरोजगार बनाउन बाख्रापालन पकेट क्षेत्र, अदुवा पकेट क्षेत्र, ओखर पकेटक्षेत्र, आलुपकेटक्षेत्र, भटमास पकेटक्षेत्र, महउत्पादन पकेटक्षेत्र लगायतका पकेटक्षेत्र बिकास गरी अनुदान र क्षमता बिकासका काम गर्दै आएका छौं । साथै सामाजिक बिकासको कुरा गर्दा बिशेष गरी गाउँपालिका भित्र थुप्रै छाउगोठहरु थिए । हामिले छाउगोठ भत्काउनुका साथै जनचेतना मार्फत महिनाबारी भएको समयमा महिलाहरु मुलघरमा नै बस्ने ब्यबस्था गरेका छौं । जातिय छुवाछुतलाइ जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषितगरी निति तथा कार्यक्रममा नै राखेका छौं ।
५ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग के कस्तो समन्वय भइरहेको छ ?
गाउँपालिकाको समग्र बिकासका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सँग समन्वय गर्नु नै पर्छ । प्रदेशमा समेत कर्मचारी अभाव लगायतका कारणले धेरै जसो प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध योजना गाउँपालिकाले नै हेर्ने गरेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाको मात्र कुरा गर्नेहो भने चालु आर्थिक बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात, सिचाइ लगायतका बिषयमा, प्रदेशको १२ करोड र संघीय सरकारको १ करोड ५० लाख बराबरका योजनाहरु प्राप्त भएका छन् ।
६. भ्रष्टचार बढ्यो भनेर स्थानीय तहहरुलाइ आरोप लाग्ने गरेको छ, शुसासन कायम राख्नका के कस्ता कामहरु गरिरहनु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा आम नागरिकले आफु सँग सरोकार राख्ने हरेक बिषयको खोजिनिती गर्ने क्रम पनि बढेको छ, यो राम्रो पनि हो । गाउँपालिकाले आम सरोकारका बिषयमा गर्ने हरेक कृयाकलापको जानकरी आमनागरिकले थाहा पाउने प्रणालीको बिकास गर्नु पर्छ र जनसरोकारका योजनाहरु जनताको पक्षमा भएकी भएनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । हरेक योजनामा अलग्गै अनुगमन समिती बनाएका छौं । हरेक बर्ष नियमअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौं । साथै बार्षिक निती तथा कार्यक्रम आम जनताका सामु सार्बजनिक समेत गर्ने गरेका छौं । आर्थिक बर्षमा गरेका गतिबिधीहरु आम नागरिक सामु जाओस भन्नका लागि सार्बजनिक सञ्चारका माध्यम लगायतको प्रयोग गर्ने गरेका छौंैं । शुसासन र पारदर्शितलालाइ मुल मर्मका रुपमा नै लिएका छौं ।
७ कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि के के काम गर्नुभयो ?
त्यसै पनि बोगटान फुड्शिल गाउँपालिका बिकट नै छ । आम नागरिकले जटिल किसिमको स्वास्थ्य उपचारको लागि सहजै सुबिधा प्राप्त गर्न गाहे छ । यस क्षेत्रको बर्तमान अवस्थालाइ ध्यानमा राख्दै तत्कालै हामि अस्थायी कोभिड १९ उपचार अस्पताल निर्माणको चरणमा छौं । तत्कालै निर्माण हुने कोभिड अस्पतालमा डाक्टर, स्टाफनर्स, अनमी, अहेव लगायतको जनशक्ति सहित आफ्नै फार्मेसी समेत सञ्चालनमा हुनेछ । साथै समय समयमा गाउँपालिकाबासीलाइ जनचेतना मुलक कार्यक्रममा सहभागी, मास्क सेनिटाइजर बितरण गरेका छौं । भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुका लागि वडा स्तरमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेन निर्माण गरेका छौं ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, आश्विन २४, २०७७, ०३:०८:५५